ShweMinThar: WY ဆေးပြား အကြောင်း
WY ဆိုတာ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားပါ။ အစပိုင်းမှာ စိတ်ကြွပြီး ကောင်းသလို ဖြစ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ စိတ်ဖောက်ပြန်ရူးသွပ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကို အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲစေတဲ့အပြင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုပါ ဒုက္ခမျိုးစုံပေးလို့ ဒီစာကို ရေးတာပါ။
WY လို့ လူသိများတဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားကို ရာဘ / ယာဘ / ရာမ / ယာမ / မြင်းဆေး / ကြယ်သီး / အသီး ဆိုပြီး နာမည်မျိုးစုံနဲ့ လူသိများပါတယ်။ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ Methamphetamine (45 - 65) mg နဲ့ Caffeine (25 - 35) mg အကြမ်းဖျင်း အချိုးအစားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ လူသိနည်းတာတခုက Lithium ပါဝင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘထ္ထရီတွေမှာ အသုံးများတဲ့ သတ္ထုတခုပါ။ 88 လို့ တံဆိပ်ရိုက်ထားတဲ့အတွက် 88 လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
သန့်စင်တဲ့ Methamphetamine ကိုတော့ ICE လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်ပုံစံ အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲတွေပါ။
MDMA ကတော့ Ecstasy လို့ လူသိများပါတယ်။ အကုန်လုံးကတော့ Amphetamine အနွယ်ဝင်တွေပါပဲ။
Amphetamine ဆိုတာ ဗဟိုအာရုံကြောမအဖွဲ့အစည်းကို လှုံဆော်ပေးတဲ့နေရာမှာ အားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈၈၇) ခုနှစ်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိပါတယ်။ (၁၉၁၉) ခုနှစ်မှာ ဂျပန်ပညာရှင်တယောက်က အခဲအဖြစ် စတင်ပြုလုပ်ပါတယ်။ အစပိုင်းကတော့ စစ်သုံးဆေးဝါးအဖြစ်သာ သုံးခဲ့ပေမယ့် (၁၉၅၀) ကျော်လာတော့ အဝေးပြေးကားမောင်းသမားတွေ၊ အားကစားသမားတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေပါ သုံးစွဲလာကြပါပြီ။ (၁၉၆၀) ခုနှစ်မှာတော့ ထိုးဆေးအနေနဲ့ပါ ထွက်ရှိလာပါတယ်။
အာရှတိုက်မှာ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် အကြီးအကျယ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ' ဝ ' စစ်တပ်က စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ စတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့တာပါ။ WY ဆိုတာ Wa Youth (ဝ လူငယ်) ကနေ လာတာပါ။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံမှာ WY မရှိတဲ့နေရာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အဓိက ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ Pseudoephedrine ကို အိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကနေ ဆေးကတ်ကနေခွာပြီးတော့ သွင်းယူပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ နေရာစုံ လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံကနေ ကုန်ကြမ်းရော ကုန်ချောပါ ကြိုက်သလို ဝင်ထွက်ကူးသန်းနေတော့တာပါပဲ။ ဆေးပြားရိုက်ဖို့အတွက် (၈) ပေပတ်လည် အခန်းလောက်နဲ့ပဲ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ထိုင်းဘက်မှာဆိုရင် ဆေးပြားရိုက်စက်ကို ကားထဲထည့်ပြီး အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာတင် ဆေးပြားထုတ်နေကြတာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စံချိန်တင် ပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရရှိမှုအများဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် နေရာယူထားပါတယ်။ အဖမ်းအခံရဆုံးကတော့ သုံးစွဲသူတွေပါ။
လူသိများတဲ့ WY ဆေးပြားတွေက ပန်းရောင် နဲ့ အနီရောင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းက တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ထားပုံ အမြောက်အများ ရှိသလို အရောင်မျိုးစုံလည်း ရှိပါတယ်။
တံဆိပ်ရိုက်ထားပုံအရ ( ပုံမှန်၊ Yအမှီးတို၊ အမှီးအရှည်၊ အမှီးကောက်) ဟူ၍ (၄)မျိုး
တံဆိပ်ရဲ့တဖက်ခြမ်းမှာ (ဖင်ချိုင့်၊အပြည့်၊ အခုံး) ဟူ၍ (၃)မျိုး
ပန်းရောင်မှာ (အဖျော့၊ ပုံမှန်၊ အရင့် ကြက်သွေး) ဟူ၍ (၄)မျိုး
အဖြူရောင်မှာ (အဖြူစင်၊ နို့နှစ်ရောင်) ဟူ၍ (၂)မျိုး
ဆေးလုံးရဲ့ထုထည် (အထူ၊ အလယ်အလတ်၊ အပါး) ဟူ၍ (၃)မျိုး
စုစုပေါင်း (၁၆) မျိုး ရှိပါတယ်။
88 မှာ တဖက်မှာ 88 နောက်တဖက်မှာ (ပြောင်၊ 0၊ 1၊ 2၊ 8) ဟူ၍ (၅) မျိုး ရှိပါတယ်။
ဆေးပြားကို ဝါးစားတယ်။ Methamphetamine သီးသန့်ပဲပါတဲ့ ဆေးတွေက ဝါးစားလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက WY တွေနဲ့တော့ မစမ်းသပ်ပါနဲ့။ အန္တရာယ်ရှိလို့ပါ။
ဆေးကို အမှုန့်ချေပြီး နှာဝမှာ ဘိန်းဖြူရှူသလို ရှူလို့ရတယ်။ ဒါလည်း ပြဿနာရှိတာပါပဲ။
အကြောထဲ ထိုးတယ်။ ဆေးပြားလေးတွေကို မိုးရေနဲ့ဖျော်ပြီး ဘိန်းထိုးသလို ထိုးတာပါ။ အဓိက သွေးကြောမကြီးတွေထဲမှာ ဆေးခဲသွားတတ်လွန်းလို့ သေကြတဲ့သူတွေလည်း မနည်းပါဘူး။ အရှိန်တက်တာ အရမ်းမြန်သလို အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဆေးပြားအငွေ့ကို ရှူကြတယ်။ အကင်ခဲပြား၊ အလှပြင်ဆိုင်သုံးခဲပြား၊ အိုးဖာတိပ်၊ ပီကယ်ခွံ နဲ့ ဆေးလိပ်ဗူးခွံထဲက ခဲပြား အစရှိသဖြင့် အောက်ခံခဲပြားပေါ်မှာ ဆေးပြားကိုတင်ပြီး ပြုပြင်ထားတဲ့ မီးအသေးစားလေးနဲ့ အပူပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ အငွေ့ကို ရှူကြတာပါ။ ပိုက်ဆံကို လိပ်ပြီးတော့ တိုက်ရိုက်ရှူကြတယ်။ ရေသန့်ဘူးခွံကို အအေးသောက်ပိုက်ကောက်တပ်ပြီးတော့လည်း ရေခံပြီးတော့ ရှူကြတယ်။ နဂါးငွေ့တန်းကို လိုက်ဖမ်းတယ်လို့ တင်စားကြတာပဲ။ ရေ မခံရင် အသေမြန်တယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဂျိုး လို့ခေါ်တဲ့ အဖြူရောင် အမှုန့်လေးတွေကို ပြန်မစားသင့်ပါဘူး။ ငတ်ကြီးကြရင် ကြသလို အန္တရာယ်ပိုများလာမှာပါ။
အစပိုင်း သုံးစွဲကာစမှာ ဘာကို ယူလို့ ယူရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပေမယ့် နောက်ပိုင်းကြရင် ဆေးထိုင်ချနေရတဲ့ ခံစားမှုကိုပဲ အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဆေးစွဲနေတာ သေချာပါပြီ။ WY ကို တိုင်းရင်းသားတွေက " တခုလို " လို့ ခေါ်တာ ကြားဖူးပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရှိရှိ မလောက်တာရယ် ချပြီးရင်း ချချင်စိတ် ဖြစ်တတ်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ အရမ်းကို ဆေးစွဲဖို့ လွယ်ကူကြောင်း သတိပေးပါရစေ။ အစ မလုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သုံးစွဲသူအဆင့်ကနေ စွဲလန်းသူဖြစ်သွားဖို့ မခက်ခဲတာမို့လို့ ရပ်တန်းက ရပ်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးဖြစ်တာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။
စတင် သုံးစွဲကာစမှာ ဘာလုပ်လုပ် အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းပြီးတော့ တက်ကြွနေမယ်။ စိတ်ကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေသလို ခံစားရမယ်။ အင်အားတွေ တိုးနေသလို ခံစားရမယ်။ အဆာခံနိုင်ပြီးတော့ အစာစားချင်စိတ် မရှိဘူး။ လုပ်သမျှ အဆင်ပြေနေသလို ပြောကောင်းဆိုကောင်း ဖြစ်နေမှာပါ။
ဆေးသုံးကာစမှာ ကောင်းသလိုဖြစ်နေပေမယ့် ဆေးဆက်သုံးစွဲတာနဲ့အမျှ လူလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပျက်စီးလာမှာပါ။ ဆေးပမာဏများလာရင်တော့ အာရုံထိန်းချုပ်မှု ပျက်ယွင်းလာပြီး ကြွက်သားတွေကိုပါ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်နည်းပါးလာပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း နည်းပါးလာပါလိမ့်မယ်။ သံသယစိတ်တွေ များလာပြီးတော့ ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ များပြားလာပြီးတော့ နောက်ဆုံးတော့ သေရမှာပါပဲ။ အဖမ်းခံရတာ ထောင်ကျတာတွေကတော့ မလွဲမသွေနည်းပါး ကြုံရမှာပဲလေ။
မသုံးဖူးသေးရင် လက်တည့်မစမ်းပါနဲ့။ သုံးမိနေရင် ရအောင်ဖြတ်ပါ။ ဆေးကျတဲ့ အချိန်ဆိုရင် တကိုယ်လုံး ကိုက်ခဲပြီး အားမရှိဖြစ်ပြီးတော့ ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတာကို ကြုံဖူးရင် သိကြမှာပါ။ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု များလာမယ်။ စိတ်တိုလွယ်မယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဆေးသုံးတဲ့ခံစားမှုပြန်ရဖို့အတွက် ငွေကုန်လူပန်းခံပြီးတော့ ထောင်နှုတ်ခမ်းပေါ်နင်းပြီး ကြိုးစားတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ လူမှုစီးပွားပျက်စီးပြီးတော့ အရာရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ငမိုက်သားဘဝကို အသေအချာရောက်ရမှာပါ။
နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်းများရောဂါ၊ စိတ်ရောဂါအခံရှိသူတွေ၊ ဆေးဝါးအလွဲသုံးဖူးသူတွေ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရော နို့တိုက်မိခင်တွေပါ လုံးဝ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အသက်အရွယ် နဲ့ လူအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကွဲပြားပါတယ်။ အမြင်မှုန်ဝါးမယ်။ ခံတွင်းတွေ ခြောက်မယ်။ ရေငတ်မယ်။ ပါးစပ်နံမယ်။ သွားအရင်းမှာ ကျောက်တည်မယ်။ သွားတွေ ကြွေကျမယ်။ နှလုံးခုန်အရမ်းမြန်မယ်။ သွေးတိုးမယ်။ သွေးပေါင်လည်း ထိုးကျတတ်တယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးယိုစီးတတ်တယ်။ အဆုတ်ရေဝိုင်းတဲ့ရောဂါလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ချွေးထွက်များမယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်က သိသိသာသာ တက်နေတတ်တယ်။ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေကတော့ အေးစက်နေမယ်။ ကြွက်သားတွေ နာကျင် ပျက်စီးပြီး ပိန်ချုံးလာပါမည်။ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးလာရင် ခါးနာတတ်တာကို သတိထားပါ။ ဆီးသွားရခက်ခဲလာမယ်။ ဆီးသွားချင်စိတ်ကိုလည်း မထိန်းနိုင်ဖြစ်တတ်သလို ဆီးမထွက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဝမ်းလည်း အရမ်းချုပ်လာလိမ့်မယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေ မျိုးစုံ ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမယ်။ ဒေါသထွက်လွယ်မယ်။ အရမ်းမေ့တတ်လာမယ်။ မှတ်ဉာဏ်တွေ နည်းလာမယ်။ လိင်စိတ်ပြောင်းလဲလာမှုတွေ ကြုံရမယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုတွေကို တောင့်တလာလိမ့်မယ်။ သံသယစိတ်တွေများမယ်။ ရဲတွေကို တွေ့ရင် အလိုလို ကြောက်စိတ် မုန်းစိတ်ဝင်လာမယ်။ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေဖြစ်မယ်။ အရမ်းဆိုးလာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ လုပ်လိမ့်မယ်။
အရက်၊ ဘီယာကဲ့သို့သော လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်၍ မသုံးသင့်ပါ။ Cocaine နှင့် Ecstasy ကဲ့သို့သော စိတ်ကြွဆေးများနှင့် တွဲသုံးပါကလည်း ပိုမို၍ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ MAOIs (စိတ်မကျဆေး) များနှင့်တွဲသုံးပါကလည်း အာနိသင်ပြင်းထန်သွားမည်ဖြစ်၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါသည်။ ICE နှင့်တွဲသုံးပါကလည်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။
ဆေးစွဲနေသူတယောက်အဖို့ ရုတ်တရက် ဆေးဖြတ်လိုက်သောအခါ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ဘာမှ လုပ်ချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်များနေခြင်း နှင့် အိပ်မရဖြစ်ခြင်း (သို့) အလွန်အမင်းအိပ်ချင်နေခြင်းတို့ကို (၂၄) နာရီအတွင်း ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ အာရုံကြောအဆိပ်သင့်ခြင်း (Neurotoxicity) ကိုတော့ ဆေးဖြတ်ပြီး အချိန်အတော်အကြာအထိ ခံစားနေရမှာပါ။ အရေးကြီးတာကတော့ ဆေးဖြတ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြတ်ပြီးနောက် ပြန်လည်မသုံးစွဲမိစေရန် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
(၂၀၁၄) ခုနှစ် မေလအထိ တိုက်ရိုက်ကုသနိုင်မည့် နည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ (၂၀၁၆) အစောပိုင်းတွင်တော့ စမ်းသပ်ကုသနိုင်မည့် ဆေးတမျိုး ထွက်ပေါ်လာပေမယ့် ဈေးကွက်အတွင်းတွင် မပေါများသေးပါ။ Cocaine ဖြတ်တာနှင့် ဆင်တူပါတယ်။
ကုသသည့် နည်းလမ်းတခုတည်းနှင့် အဆင်မပြေပါ။ ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် အပြုအမူဆိုင်ရာ ကုထုံးများ နှင့် စိတ်ဖက်ဆိုင်ရာ ကုထုံးများကို တွဲဖက် ကုသပေးရပါမည်။ ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် ကြုံရမည့် ဝေဒနာ နှင့် စိတ်ခံစားမှုများ လျော့ပါးစေရန် အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့ မိမိ ဝါသနာပါသည့် အားကစား ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ပြောင်းလဲစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ဘာသာရေး လိုက်စားခြင်းများဖြင့် ဆေးစွဲခြင်းကို ကုသနိုင်ပါတယ်။ Amino acid ပါသော အားဆေးများ နှင့် Vitamin C ကို သောက်လို့ရပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသပြီး ဆေးဖြတ်လို့ရသလို စိတ်ကို နိုင်နင်းရင် မိမိဖာသာ ဖြတ်လို့ရပါတယ်။
(၁၉၉၃) ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၅) အရ သုံးစွဲသူ ဆိုရင် ထောင်ဒဏ် (၃ - ၅) နှစ် ချနိုင်သလို ပုဒ်မ (၁၆) အရ လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၅ - ၁၀) နှစ် ချလို့ရပါတယ်။
ရဲဖမ်းခံရရင် (၁) နှစ်ကျော်တဲ့အထိ အမှုမပြတ်ပဲ (၂) ပတ်တခါ ရုံးချိန်းတက်နေရမှာပါ။ ဆီးစစ်လို့ ဆေးကျရင် ကျိန်းသေ ထောင်ကျမှာပါ။ ဆေးသုံးတဲ့လူနဲ့ အတူဖမ်းမိတဲ့အခါ ဆေးအောင်နေရင်တောင် အနည်းဆုံး (၆) လလောက် အချုပ်ကျနေမှာပါ။ အပေါင်းပါအနေနဲ့ အမှုပြီးတဲ့အထိရှင်းရမှာပါ။
မိမိဆီမှာ ဆေးပြား (၃၀) နဲ့ ဖမ်းဆီးခံရရင်တော့ ပုဒ်မ ၁၉ (က) နဲ့ ငြိသွားမှာပါ။
ပုဒ်မ ၁၉ (က) မှာ " မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးကို ရောင်းချရန် အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တဆင့်ပေးပို့ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း " လို့ ဖော်ပြထားပြီး ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုစီရင်ခြင်း ခံရပါက ကျူးလွန်သူကို ထောင်ဒဏ် အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ်ကနေ အများဆုံး နှစ်အကန့်အသတ်မရှိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
ဆေးစစ်တဲ့အခါ Detection Period ကတော့ (၂ - ၃) ရက်ပါပဲ။ သိထားတဲ့အတိုင်း ဆေးစစ်ချက်ကလည်း ငွေပါပဲ။ ရေထည့်စစ်တာတောင် ဆေးကျတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ လက်လီထက် လက်ကားကို ဦးစားပေးတာကို သတိရကြပါ။
ဆေးသုံးရင် ပထမဦးစွာ ငွေကုန်မယ်။ ဒုတိယက လူ ထိမယ်။ တတိယက မိသားစုကိုပါ အကျိုးသက်ရောက်မယ်။ ရဲဖမ်းခံရရင် ဘဝပါ ပျက်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အစမလုပ်ကြဖို့ နဲ့ ရပ်တန်းကရပ်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကသာ အဓိကပါ။ ဆေးသုံးစွဲပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆရာကြီးလို့ အထင်ရောက်နေပြီး နှစ်အနည်းငယ်လောက် နေပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အစွန့်ပယ်ခံ ဆေးသမားတယောက်အဖြစ် နေထိုင်မလား။ ပုံမှန်လူတယောက်လို ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်သွားမလား။ မိမိဖာသာ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။
ဒီစာဖြစ်မြောက်လာဖို့အတွက် ကိုးကားခဲ့ရတဲ့ စာရေးသူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှားအယွင်းပါခဲ့ရင် ကျနော့်ရဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအကျိုးအတွက် ဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကြီး မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်မှ မြန်စွာ လွတ်မြောက်ပါစေ။
(1.) “Yaba Fast Facts”. US National Drug Intelligence Center. National Drug Intelligence Center. Jun 2003. Retrieved 2014-11-13.
(2.) Thornton, Phil (12 February 2012). “Myanmar’s rising drug trade”. Bangkok Post.
(3.) YABA: The source of super sexual crave and desire, the source of endless energy and nurturing of the INNER MONSTER (written by Arunav Shuvro)
(4.) Technology impacts on drug production in Asia: The role of amphetamines in Asia’s growing drug problem
This paper was presented by Dr Sandy Gordon
on behalf of Commissioner Keelty ataconference on the Global Economy of Illicit Drugs held in London during June 25-26, 2001.
Prepared with inputs from the Strategic Intelligence Team.
Credit: Phyo Paing Soe´s Facebook Account
Posted by Alex Aung at 5:02 PM